Nhau - YEMAHARA BUDIRO! Nyowani Graphene Girisi
CHEMA CHEMAHARA! Nyowani Graphene Girisi
PETROKING PETROLEUM HEBEI CO., LTD, Kubva pane yedu fekitori yakavambwa muna 1988. Tine makore makumi matatu nemaviri 'girisi yekugadzira ruzivo uye makore gumi echiitiko tichishanda nenyika dzinopfuura makumi mana muAsia, Africa, European neAmerica musika weindasitiri. Tiri kuwana Tianjin chiteshi. Zvakare njanji uye kutakurwa nemhepo zviri nyore kwazvo, izvo zvinogona kuvimbisa nguva yekuendesa.
Isu dzidzira mukugadzira Multipurpose Lithium Base Girisi, Yakanyanya Kutya Girisi, Yakanyanya Pressure Grease, Lithium Complex Grease, Aluminium Complex Grease, Graphite Grease, Anhydrous Calcium Grease, Injini Oiri, Gear Oiri, Hydraulic Oiri etc.
Kazhinji iyo yekudonha poindi yegrisi iri 140 degree kusvika 380 degree. Ivo vaigona kushandiswa mumabhegi, marori uye michina. Iyo inonyanya kufarirwa ndeye High tembiricha mafuta, ayo anogona kushandiswa mumarori anorema uye anoita mushe mumamiriro ekunze anopisa.
Mazuva ano, timu yedu yehunyanzvi yakagadzira graphene grisi nyowani, iyo yekudonha poindi iri 600 degree kusvika 1000 degree. Graphene girizi yava nyowani kuChina uye isu tiri kushandisa iyo patent.
Feature 1: kuderedza kukakavara ne50%
Chikamu 2: kuderedza abrasion ne50%
Feature 3: Makumi gumi akareba hupenyu hwebasa, 500000 km kugadzirisa pasina
Chinhu chakanyanya kukosha kudzikisa kuramba kwekutyaira uye kuchengetedza 5% mafuta
Uye zvakare, isu tinogona zvakare kuburitsa chaiyo zvigadzirwa zvinoenderana nevatengi 'kudiwa. Kunyangwe kusarudza chigadzirwa chazvino kubva kukatalog yedu kana kutsvaga rubatsiro rweinjiniya kuchikumbiro chako, unogona kutaura kunzvimbo yedu yebasa revatengi nezve zvaunoda.
Isu tinotora hunhu sehupenyu hwedu uye tine yakasimba kudzora mhando mune nhanho dzese dzekugadzira uye kuomerera "Mutengi kutanga" seyakagara bhizinesi uzivi.
Isu hatisi kupa chete izvo zvinhu, asiwo basa rakanakisa, iro rinogona kuchengetedza kwenguva refu kubatana hukama nevatengi vese
Tichashanda nesimba kupa vatengi zvimwe uye zvirinani zvigadzirwa.